WardheerNews:Warku ha sii faafo W/Q Dr. Kpachits
Warku ha sii faafo:WardheerNews W/Q
George Kapchits Nov 16, 2009
Nin fadhiyaa soor buu kaa filanayaa, nin socdaana war, baa la yidhi. Maadaama Soomaalidu dad fadhiya aanay ahaan jirin, maantana aanay ahayn, wax war ka muhimsanna horey uma jiri jirin, umana jiro maanta. Dr. George Kapchits Waqtiyadii hore warku wuu iska faafi jirey. Taas oo ay ka muuqato sheekada hoos ku qoran: Waxaa la yiri: Nin ayaa faras fuulay. Meel fog ayuu tegay. Ninku wuxuu rabay inuu ogaado sida warku u faafo. Labo beri meel cidda looga socdo ayuu inta tegay oo dundumo korkeed fuulay, soddohdii oo ku xil leh caayay. Markuu soddohdii caayayey, duddumada godkeeda ayuu afka ku ritay. Taasna wuxuu ula dan lahaa inuu ogaado in aan cidina maqlin.
Goonyihiisana wuu iska dhugtay, markuu hadalka cayda ah sheegayey. Markuu yiri wixii uu rabay, ayuu wuxuu yiri:
Bal dadku waa kan yiraahda: ‘Warku wuu faafaa’ e soddohday hay I maqasho.
Gurigii ayuu ku soo noqday. Faraskii markuu ka soo degay ayuu soddohdii arkay. Wuu salaamay. Wuxuu yiri:
Soddoh, bal iska warran! Soddohdii waxay ku tiri:
Maandhow, dareen adiga kaa weyn ma ogi!
Ninkii wuxuu yiri:
Oo soddoh, dareenkaasi waa maxay? Markaasay soddohdii ku tiri:
Maandhow, waa adigii wanaagsanaa ee maxaa ku baray caydayda?
Markaasaa ninkii afka kala qabtay oo naxay. Wuxuu ogaaday in warku faafo. Wuxuu yiri:
Soddoh, yaa kuu sheegay in aan ku caayay? Waxay tiri:
Maandhow, dabaylaha ayaa siday warka!
Maanta warka waa la faafiyaa, iyadoo la cuskanayo habab farabbadan oo farsamadeed, oo kuwa ugu casriyaysan ay aad u barteen Soomaalida qurbaha joogta. Tusaale cad waxaa loo soo qaadan karaa mareegta la yidhaahdo WardheerNews ee sannadguuradeeda 5-aad oo ku beegan bishan 23 keeda ay u diyaargaroobeyaan dad badan oo aad u qadderiya wararka ay fidiso oo aan anigu ka mid ahay. Waxaan WardheerNews u jeclahay in ay faafiso warar degdeg ah oo dhab ah oo kala cayncayn ah, una qalma niyadda aan u hayo in aan la socdo waxyaalaha hadba ka dhaca Soomaaliya gudaheeda iyo dibeddeedaba. Waxaan WardheerNews u sii jeclahay kaalinta ay kaga jirto dhowridda afka iyo suugaanta Soomaaliyeed ee laga welwelsan yahay mustaqbalkiisa. Anigoo saaxiibbadayda aqoonta leh ee ka shaqeeya WardheerNews ugu hambalyeyneya sannadguuradeeda shanaad, ayaa waxaan u hadiyeyneyaa murti shanley ah oo aan ka bartay nin oday ah oo aan kula kulmay miyiga Soomaaliyeed bishii May ee sannadkakan. Murtidaasi oo odhanyasa:
Shan belaayaa Eebbe laga baryaa: Cadho aan laga soo noqonin, Caydh aan laga dhaqanin, Cudur aan laga bogsanin, Colaad aan laga heshiinin iyo Cilmi aan laga intifaacsanin.
Waxaan ku leeyahay WardheerNews hambalyo. Dr. Geroge Kapchits
Maqaalo/waraysiyo kale oo uu qoray Kapchits
-Waraysi Dr. Kapchits - WDN
-Tooxsasho - By Dr. Kapchits - Video - Dr. Kapchits _____________________________________________________________________ We welcome the submission of all articles for possible publication on WardheerNews.com So please email your article today Opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the views of WardheerNews Maqaalkani wuxuu ka turjumayaa aragtida Qoraaga loomana fasiran karo tan WardheerNews Copyright � 2009 WardheerNews.com